Abenzi nabahlinzeki beDock Ramp | I-China Dock Ramp Factory
I-China Dock Rampihlukaniswe yaba yizinhlobo ezimbili, enye iyinqwaba yemikhumbi ehambayo futhi enye inerampu emile yegceke.Irephi yemikhumbi elungisiwe iyithuluzi elikhethekile elisizayo lokulayisha nokulayishwa kwempahla eloli kufakwe endaweni yesikhulumi. Ukuphakama kwengxenye engaphambili yesikhulumi sebhuloho lokugibela kungalungiswa ngokuya ngobude begumbi lamaloli, futhi udebe oludlulayo luhlala liseduze kwegumbi.
Ilayisha umthamo: 6 ~ 15ton.Offer service ngezifiso. Usayizi wengxenyekazi: 1100 * 2000mm noma 1100 * 2500mm. Nikeza isevisi eyenziwe ngezifiso. Spillover valve: Kungavimbela umfutho ophakeme lapho umshini unyuka. Lungisa ukucindezela. I-valve yokwehla okuphuthumayo: ingaya phansi uma uhlangabezana nesimo esiphuthumayo noma ugesi ucishiwe.
I-Stationary Dock Ramp iqhutshwa yisiteshi samaphampu we-hydraulic kanye nemoto kagesi. Inama-cylinders amabili wokubacindezela. Enye isetshenziselwa ukuphakamisa ipulatifomu kanti enye isetshenziselwa ukuphakamisa i-clapper. Kusebenza esiteshini sezokuthutha noma esiteshini sempahla, ukulondolozwa kwempahla njll.
Zonke izinhlobo zokuphatha izimoto zingadlula ngokushelela ebhulohweni lokuhambisa izimpahla phakathi kwegumbi lokugcina impahla kanye nenqola. Yamukela imodi yokulawula inkinobho eyodwa, elula kakhulu ukuyisebenzisa. Kudingeka opharetha oyedwa kuphela ukuthi asebenze, futhi izimpahla zingalayishwa ngokushesha futhi zilayishwe. Kwenza ukulayishwa nokulayishwa kanzima kwebhizinisi kube lula, kuphephe futhi kusheshe, ngaleyo ndlela kusindiswe umsebenzi omningi, kuthuthukiswe ukusebenza kahle komsebenzi, futhi kutholakale izinzuzo zezomnotho eziphakeme. Kuyimishini edingekayo yokukhiqiza okuphephile futhi okuphucukile kwamabhizinisi esimanje nokwenza ngcono ukushesha kwezinto zokusebenza.enye inqwaba yomgwaqo oyiyadi, Le ramp yomkhumbi esetshenziswa njengebhuloho lenguquko lezimfoloko zokuhamba lisuka phansi liye enqoleni lapho amaloli elayishiwe futhi ethuliwe. Ukuhamba kwayo kungahlangabezana nezidingo zokulayisha ngokuthukuthela nokulayishwa kwemisebenzi ezindaweni ezahlukahlukene. Yenziwe ngamandla amakhulu manganese steel tube unxande ngamandla aphezulu ngokweqile. Umthambeka wenziwe ngothango lwensimbi olunamazinyo, olunokusebenza okuhle kakhulu kwe-anti-skid. Ingaphezulu lemishini liphathwa ngokudubula kuqhume nangokwehla, futhi kusetshenziswa iphampu ye-hydraulic esetshenziswayo njengamandla okuphakamisa. Akudingeki ugesi wangaphandle, olungele ukusetshenziswa kwangaphandle ezindaweni ezingenawo ugesi.